HIM | Health in Myanmar » 2010 » February
အဝေးပြေးယာဉ်လုပ်သား များတွင် HIV ပိုးတွေ့မှု လျော့နည်း၊ လူငယ်ထုတွင်တွေ့ရှိမှု များပြား
မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း နှင့် IFRC အသင်းတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွင်း၌ အဝေးပြေးယာဉ် လုပ်သားများတွင် HIV ပိုးတွေ့ရှိမှု လျော့နည်းလာပြီး လူငယ်ထု အကြားတွင် ပိုးတွေ့ရှိမှု များပြားလာကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းမှ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူအချို့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ (Lanpang) ဆေးရုံ (Day Care) ဌာနနှင့် Panuankeaw (စေတနာအဖွဲ့) တို့ ပူးပေါင်း၍ AIDS ဝေဒနာရှင် ၈၀၀ ကျော်တို့အား အင်တာဗျူးလုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ရင်ဖွင့်လွှာရေးစေခြင်းဖြင့် ဤစာအုပ်ငယ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ စာအုပ်ပြုစုသူ၏ အဆိုအရမူ အချို့ ဝေဒနာရှင် များ၏ “ရင်ဖွင့်လွှာ” များသည် ထိရောက်လွန်းသဖြင့် “စာရေးဆရာ” ဟူ၍ပင် ကင်ပွန်းတပ်သင့်သည်ဟု မှတ်ချက်ချပါမည်။
ဘာလီကျွန်းတွင် ကလေးသူငယ်အား မဖွယ်မရာပြုမှုမြင့်တက်လာနေ
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဘာလီကျွှန်းတွင် ကေလးသူငယ်များအား မဖွယ် မရာ ပြုမူ ဆက်ဆံမှုများ တစထက် တစ မြင့်တက် လာနေကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ရေး ကော်မရှင်က ကြေညာ ခဲ့သည်။
Empathic account written
Mon Mon Myat has written an empathic account of two sex workers living with the virus. Compare this story to the latest Thai one posted last month.
You can give your views to the UNAIDS board
Below are English and Burmese links toaSurveymonkey questionnaire for you to complete and send to the NGO Delegation to the UNAIDS board. They can take your views there. Even if you are only one voice.
လာလေ၊ အတူ သွားကြစို့
“ဘယ်သူမှ ကျွန်းကလေးလို ထီးတည်းနေလို့မရဘူး
တိုက်ကြီးရဲ့ တဖဲ့၊ ပြည်မကြီးရဲ့ တပိုင်းပဲ။
လူတဦးသေခြင်းဟာ ငါ့ကိုလည်း ထိစေတယ်
ငါဟာလည်း လူသားထဲကလူမို့ အားလုံးနဲ့ ပတ်သက်နေတာပဲ။
ဒီတော့ လူသေလို့ ခေါင်းလောင်းထိုးရင်
ဘယ်သူ့အတွက် ထိုးတာလဲလို့ မမေးနဲ့
သင့်အတွက် ထိုးတာပဲလို့သာ မှတ်လိုက်”
ကာရာအိုကေအမည်ခံ ပြည်တန်ဆာရုံတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးများအားဖမ်းဆီး
ထိုင်းနိုင်ငံ လဘူရီခရိုင်။ ဘန့်ဘုန်မြိုနယ် နခိုခြုံရွာ ၁၃၁ မူ ၁၁ တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ပန်ပီ ကာရာအိုကေနှင့် စားသောက်ဆိုင်တွင် ပြည်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာမှ တိုင်တန်းသဖြင့် မြို့နယ်ရဲမှူး ၀ီရက ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ လော၊မြန်မာ၊ထိုင်းယိုင် (တောင်ကြီးရှမ်း) အမျိုးသမီး (၂၁) ယောက် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြန့်ဝေမူဖြင့် ဂျာမန်ပေါ့ပ်အဖွဲ့မှ အဆိုတော် နက်ဂျာဘီနက်ဆာ တရားစွဲခံရ
မိမိတွင် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စွဲကပ်နေကြောင်း အတူနေခဲ့သော အမျိုးသားသုံးဦးကို အသိမပေးဘဲ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည့် ဂျာမန်အမျိုးသမီး တေးဂီတအဖွဲ့No Angels မှ အဆိုတော် နက်ဂျာဘီနက်ဆာအား အစိုးရရှေ့နေများက တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
လိင် လှုံ့ဆော်သည့် iPhone Application များ Apple ပိတ်ပင်
Apple ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းင်း၏ နာမည် ကျော် iPhone ရှိ လိင် လှုံ့ဆော်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေ သည့် Application များအား စတင် ပိတ်ပင် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
Hopes running high for results from the Global Fund grant
Global Fund 'officials' come and go. It is now up to the two Principal Recipients UNOPS and Save the Children to get plans in place to make the money work.
ဗြိတိန်တွင် အသက်မပြည့်သူ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးအရေအတွက် တိုးပွား
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် အသက်(၁၀)နှစ် ခန့်အရွယ်သာရှိသေးသော မိန်းကလေးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နေရလျက်ရှိသည်ဟူသော တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ကိန်းဂဏန်းသစ်များကိုဖော် ပြခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွင်း The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) မှ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာ အရ လူကုန်ကူးမှုတွင် အမျိုးသမီး များသာ အဓိက ထုံးစံအတိုင်း သားကောင် ဖြစ်ခဲ့ကြရ သော်လည်း ထိုပြစ်မှု ကျူးလွန်ရာ၌ အမျိုးသမီးများ သည်လည်း အဓိက ပါဝင် ပတ်သက်ကြသည်ဟု ထုတ်ဖော် တွေ့ရှိလာရသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် ဆက်နွယ်သည့် လိင်ကုန်ကူးမှုကိုသာ အများဆုံး လေ့လာစုံစမ်း ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။